SHARMA’ARKE: Waxaan Xoogga Saarayaa Heli-taanka Xasillooni Siyaasadeed - iftineducation.com
SHARMA’ARKE: Waxaan Xoogga Saarayaa Heli-taanka Xasillooni Siyaasadeed
iftineducation.com – Ra’iisul wasaaraha la ansixiyay Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke ayaa shaaca ka qaaday maanta inuu xoogga saarayo dhowr arrimood oo ay ugu muhiimsanayd dhameynta deggenaanta siyaasadeed iyo adkeynta amniga dalka.
Khudbad uu Sharma’arke ka jeediyay kulankii baarlamaanka ee kalsoonida lagu siiyay ayaa sheegay in arrimaha kale ee uu ka shaqeyn doono ay tahay sidii amniga loo adkeyn lahaa, isla markaana loola dagaalami lahaa musuq-maasuqa iyo cadaalad-darrada.
“Waxyaabaha ugu horreeya ee aan mudnaanta siin doonno waxaa ka mid ah xasilloonida siyaasadda, dhameystirka dib u heshiisiinta, fulinta hiigsiga ee 2016-ka, adkeynta amniga, horumarinta cadaaladda, kobcinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo dakhliga dowladda, maamul-wanaagga maaliyadda la dagaalanka musuqmaasuqa, kordhinta adeegga bulshada, dar-dargelinta dowlad-wanaagga iyo dib u dhisidda iyo dib u habeynta hay’adaha dowladda,” ayuu yiri Cumar C/rashiid.
Sidoo kale, ra’iisul wasaaraha ayaa sheegay inuu sida ugu dhaqsiyaha badan kusoo dhisi doono xukuumad, wuxuuna xildhibaannada hortooda ka sheegay inuu kala tashan doono dhismaha xukuumaddiisa madaxweynaha Somalia, guddoonka baarlamaanka, xildhibaannada iyo shacabka Soomaaliyeed.
“Howlaha ay qaban doonto xukuumadda aan soo dhisayo ka sokow, anigoo kaashanaya madaxweynaha iyo bulshada Soomaaliyeed waxaan dar-dar-gelinayaa helitaanka siyaasad xasilloon iyo is-faham guud oo u dhexeeya madaxda dowladda federaalka, heer maamul-goboleed iyo mid federalba, si loo helo kalsoonida shacabka Soomaaliyeed,” ayuu hadalkiisa ku daray RW Sharma’arke.
Wuxuuna intaas ku daray, in helitaanka iyo is-fahamka siyaasadeed uu laf-dhabar u yahay jirtaanka Qarannimada iyo dowladnimada, waxaana ku jira ayuu yiri horumarka dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Si kastaba ha ahaatee, ra’iisul wasaaraha cusub ee Somalia, Sharma’arke oo maanta ay xlidhibannada baarlamaanku cod aqlabiyad ah u meel-mariyeen ayaa laga sugayaa inuu muddo kooban gudaheed kusoo dhiso xukuumad la wareegta xilka.